Talata, Janoary 24, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tiako ny paoziko amin'ny Colony fahadimy, saingy heveriko fa mety ho nanaparitaka famerenana Digunation vitsivitsy izy ireo. Digg? Marina? Amin'ny alàlan'ny eritreritra rehetra, ny fasan'i Digg dia i Dugg ary i StumbleUpon no mamboly voninkazo. Vetivety ve? Miala tsiny ry vahoaka… rehefa lasa ny mpanatrika dia maty ny fampiharana sosialy. Fivoaran'ny media sosialy io. Fa andraso… tena… tsy nahalala ny LinkedIn koa izahay? Google Business? Mananihany ahy ve ianao? Angamba zavatra izany
Ity dia manokana! I Stephen dia sakaizan'i Bill zanako lahy. Lehilahy mahafinaritra i Stephen - tena manan-tsaina, be te hahafanta-javatra, ary manam-paharetana tsy mampino. Fantatro rehefa nanontany ahy izy fa angamba efa natory tsy natory izy ka tena tiako ny manampy azy. Ny bilaogin'i Stephen dia tokony ho nahaliana tamin'ny taona ho avy rehefa nankany Alemana izy. Fantatra tokoa i Alemana noho ny tsy fisian'ny bilaogera.
Asabotsy, Aogositra 5, 2006 Alakamisy Janoary 5, 2017 Douglas Karr
Rehefa nandefa horonantsary mahatsikaiky momba an'i Bill Gates sy Napoleon Dynamite aho, ny tanjoko dia ny hahita izay fiantraikan'i Digg amin'ny famoahana ny bilaogiko amin'ny hafa. Ary koa, ny tanjoko dia ny hampiseho ny vokatry ny "Digg Effect". Noa on Okdork dia mitazona ahy ho marina amin'ity iray ity. "The Digg Effect" no catapult amin'ny hits izay azon'ny tranokalanao rehefa mandefa tantara amin'ny alàlan'ny Digg izay "Diggers" hafa
Alakamisy, Jolay 27, 2006 Alakamisy Janoary 5, 2017 Douglas Karr
Ny vokatry ny Digg dia matetika resahina. Betsaka ny olona manosika hanao Digg, saingy tena fomba fanao tsara tokoa ve izany hahazoana mpamaky? Ity no zava-nitranga rehefa 'Dugg' ny tranokalako.